पहिलो पटक तीन लि,ङ्गका साथ जन्मियाे बच्चा, विज्ञानका लागि दियो चुनौती – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Intresting/पहिलो पटक तीन लि,ङ्गका साथ जन्मियाे बच्चा, विज्ञानका लागि दियो चुनौती
पहिलो पटक तीन लि,ङ्गका साथ जन्मियाे बच्चा, विज्ञानका लागि दियो चुनौती
एजेन्सी इराकमा एउटा बच्चा तीनवटा लिङ्गका साथ जन्मिए । यो सामान्य मानिसको लागि मात्र नभएर चिकित्सा विज्ञान तथा विज्ञका लागिसमेत आश्चर्य बनाउने घटना बन्यो । यसको पछाडिको कारण विज्ञानलाई थाहा छैन । यस अवस्थालाई ‘सुपरन्युमरेरी पेनिस’ (Supernumerary penises ) भनिन्छ । अहिलेसम्म संसारभरमा एकसय द्वीलि ङ्गी अर्थात् डिफालिया (Diphallia ) को केस आएका छन् । तर, यो तीन लि ङ्ग वाला केस भने पहिलो पटक सार्वजनिक भएको हो ।
यसलाई हालसम्म संसारकै पहिलो तथा दुर्लभ घटना मानिएको छ । यसअघि द्वीलिगी बच्चा जन्मिएका समाचार मात्रै आएका थिए । तर, यसको कारणको बारेमा भने अहिलेसम्म पनि पत्ता लागेको छैन ।अहिलेको यो जन्मिएको त्रिलिङ्गी बच्चाले वैज्ञानिकका अगाडि ग म्भिर तथा नयाँ चु नौ ती खडा गरिदिएका छन् ।
इराकको मोसुल शहर नजिकै दोहुकमा जन्मिएको यस बच्चाका दुइवटा लि ङ्ग श लय क्रि या गरी फालिएका छन् । विज्ञका अनुसार ६० लाख बच्चामध्ये एक बच्चा एकभन्दा बढी लि ङ्गका साथ जन्मिन सक्छ । हालसम्म संसारभरी झण्डै एक सय द्वीलिङ्गी केस थाहा भएका छन् । इन्टरनेशनल जर्नल अफ सर्जरीको केस रिपोर्टका अनुसार त्रिलिङ्गी केस भने पहिलो पटक भेटिएको हो ।
आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका अनुसार यो एउटा अति दुर्लभ रोग हो जुन ३ देखि १५ साताको भ्रुणमा हुने गर्छ । यस्तो पहिलो केस १६०० को दशकमा भेटिएको बताइएको छ । यसमा स्क्रोटम वा एनस पनि एकभन्दा बढी हुनसक्छन् । कैयौं पटक लि ङ्ग अविकसित पनि हुन सक्छन् । हालसम्म भेटिएका केसहरु एक आपसमा अलग देखिएका छन् । यसकारण यसलाई एक दुर्लभ अवस्था भएकोसमेत बताइन्छ ।
विवाहको तीन दिनसम्म भित्रको भित्रै…!
खेर जाने अण्डाको बोक्राले अनुहारलाई चम्किलो बनाउछ ! कसरी प्रयोग गर्ने त ?